नवनारी सम्मान सँगै गीतको बालकथा विमोचन » Enavanari
नवनारी सम्मान सँगै गीतको बालकथा विमोचन
काठमाडौं :नवनारी मिडियाको ११ औं वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । समाजसेवी तथा गीतकार सुना भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । समाजमा बिशेष योगदान पु¥याउनु भएका ९ जना बिशिष्ठ महिलाहरुलाई सम्मानित गरिएको थियो कार्यक्रममा भने ८ बर्षकी बालिका गीत पछाईको कथा संग्रह द ट्रेजर हन्टको पनि विमोचन गरिएको थियो । नवनारी सम्मानबाट सम्मानित हुनेमा बरिष्ठ साहित्यकार माया ठकुरी, बरिष्ठ गायिका मीरा राणा, पहिलो नेपाली नायिका भुवन चन्द, नेपालमा पहिलो मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सफल प्रो डा. दिव्या सिंह शाह, सञ्चार क्षेत्रमा बिशेष योगदान पु¥याउनु भएकी संगीता पन्त थापा, कृषि उद्यमी शान्ता बास्कोटा कोइराला, समाजसेवी कमला नेपाली, समाजशास्त्री तथा शिक्षाविद् डा. विन्दु पोख्रेल, उद्योगी व्यावसायि संगीता कडरिया प्रसाई रहनुभएको थियो ।
असार ३ गते शनिबार बानेश्वरको इन्द्रेणी फुडल्याण्डमा विविध कार्यक्रमको बिच सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै साहित्यकार माया ठकुरीले भन्नुभयो नवनारीले गरेको यो सम्मानले महिलाहरुलाई अगाडि काम गर्नको लागि थप उर्जा प्रदान गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा नवनारीका प्रबन्ध निर्देशक बिनोद पछाईले नवनारी एघारौ बर्ष सम्म आइपुग्दा पाठकको मन जित्न सफल भएको र सबैको साथले अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा बिभिन्न क्षेत्रका व्याक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने नवनारीले यो पटक पनि आफ्ना नयाँ आजीवन सदस्यहरुलाई प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरेको थियो ।
कार्यक्रममा मुख्य आकर्षक रहेकी थिइन् सानी लेखिका गीत पछाई । सबैले उनको लेखन कलाको प्रशंशा गरेका थिए । उनको बाल कथाको विमोचन पनि सम्मानीत महिलाको हातबाट भएको थियो । अक्षरा स्कुल कक्षा ३ मा अध्ययनरत पछाईले उमेर ढल्किदै गएपछि मात्र कथाको किताबहरु प्रति चासो दिनुपर्छ भन्नेकुरालाई गलत साबित गर्दै यति सानो उमेरमा कथा लेखेर नेपालको नै सबैभन्दा सानी लेखिकाको रुपमा आफुलाई चिनाएकी छन् । उनले २२ वटा अंग्रेजी बालकथा लेखेकी छन् भने यसलाई नेपालीमा समेत अनुवाद गरिएको छ । गीत भन्छिन्, ‘मैले शुरुमा एउटा कथा लेखेकी थिए अनि मम्मी बाबाले तिमीले राम्रो लेख्यौ भने किताव नै निकालिदिने भन्नुभयो । लेख्दै जाँदा २२ वटा भयो । अनि किताव भयो ।’ उनको कितावलाई ब्रदर्स बुकले प्रकाशन गरेको छ भने नेपाल अधिराज्यभरीका पुस्तक पसलबाट किन्न सकिने छ ।